Maqaalka Izabelle Hundrev ee Martech Zone
Maqaallada by Izabelle Hundrev
Izabelle Hundrev waa qoraa ku saleysan Chicago oo ka kooban qoraalada awaamiirta. Nolosha nolosha aqriska iyo qoraalka, waxay ka qalin jabisay shahaadada saxaafada ee jaamacada Missouri sanadkii 2017. Qalin jabinta kadib, Izabelle waxay biloowday shaqo iibka B2B halkaas oo ay ku takhasustay horumarinta ganacsiga. Ka dib 1.5 sano oo ay wax iibineysay, waxay ku laabatay xididadeedii saxaafadda waxayna u gudubtay xirfadda suuqgeynta waxyaabaha ku jira.
Ultimate Tech Stack ee Suuqgeyaasha Waxqabadka Sare
Jimcaha, Sebtember 11, 2020 Jimcaha, Sebtember 11, 2020 Izabelle Hundrev
Sannadkii 2011, ganacsade Marc Andreessen ayaa si caan ah u qoray, barnaamijyada adduunka ayaa cunaya. Siyaabo badan, Andreessen wuu ku saxsanaa. Ka fikir inta qalab software ee aad isticmaasho maalin kasta. Hal taleefan oo casri ah ayaa ku dul haysan kara boqolaal barnaamijyo barnaamijyo ah. Taasina waa hal aalad yar oo jeebkaaga ku jirta. Hadda, aan u adeegsanno isla fikraddaas ganacsiga adduunka. Shirkad keli ah ayaa adeegsan karta boqollaal, haddii aysan kumanaan ahayn, xalka barnaamijyada. Laga soo bilaabo dhaqaalaha ilaa aadanaha